Iisampulu zekhamera ezintsha zeHuawei P30 Pro 10X zoom ekukhanyeni | I-Androidsis
Iisampulu ezintsha zekhamera yeHuawei P30 Pro Iinkcukacha zeLens yePisciscope Lens zoom
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, uHuawei wazisa ukukhanya iisampulu ezahlukeneyo zekhamera ozibambe kunye neHuawei P30 Pro, Iflegi elandelayo yenkampani eya kuthi ikhokele umahluko Umgangatho we-P30 y P30 Lite njengezona zinamandla kolu thotho.
Ngesi sihlandlo sitsha, I-CEO yomenzi waseTshayina wabelane ngeefoto ezintsha zokwenene ezithathwe ngesixhobo. Babalaselisa ubuchule bokusondeza okubonakalayo okungu-10X apho ilensi yediskhi exhobisa ngayo.
Iifoto zithathwe ekhonsathini liqela lamakhwenkwe aseBritane, iBlue. Imifanekiso, eyahlulwe kathathu, thelekisa umpu oqhelekileyo kunye nomfanekiso osondeleyo kwaye emva koko usondele kakhulu. Ezi zimbini zokugqibela zisebenzisa indawo yefowuni ebonakalayo. (Fumanisa Okuninzi: I-AnTuTu iqinisekisa iinkcukacha eziphambili zeHuawei P30 Pro)
Njengoko ubona kwimifanekiso, iP30 Pro ithatha iifoto ezinomtsalane. Iinkcukacha kwezi zibukhali kwaye ukuveliswa kombala kugqwesileyo. Vala izithonga zibukhali kakhulu kwaye kubonakala ngathi akukho lahleko yeenkcukacha. Nangona kunjalo, umpu osondele kakhulu uphezulu, kodwa sisenokubenza ubuso besifundo kubo bonke. Siyakholelwa ukuba ikhamera iya kusebenza kakuhle kwiimeko zokukhanyisa ezilungileyo okanye ngaphandle.
IHuawei P30 Pro iza kuza nokuseta ikhamera ngasemva. Enye yeenzwa kukusondeza kwe-periscope ukuya kuthi ga kwi-10X yokuphakamisa amandla. Ifowuni iya kunikwa amandla yi I-chipset ye-Kirin 980 I-7nm kunye ne-cores ezisibhozo kwaye iya kuba nokwahluka nge-8GB ye-RAM kunye ne-256GB yendawo yokugcina yangaphakathi.
Ezinye izinto zibandakanya i-intshi enkulu ye-6-intshi + ye-FullHD + yesisombululo, ibhetri enkulu ye-mAh ene-40W yokutshaja ngokukhawuleza, kunye neempawu ezininzi ezifanelekileyo zesiphelo. umphezulu ukwenza okuphezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Iisampulu ezintsha zekhamera yeHuawei P30 Pro Iinkcukacha zeLens yePisciscope Lens zoom
Isamsung yongeza icandelo elitsha kwi-Galaxy Themes app ye-S10
Uyikhupha njani i-APK yesicelo onaso kwi-Android. (Ukuhlaziywa nevidiyo)